>ကျေးဇူးတရားနဲ့ သံယောဇာဉ်တရားကိုကောက်ရလေးရဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာတွေ့ ရပါတယ်။စဉ်းစားမိတာက သံယောဇဉ်တွယ်မိမှ ကျေးဇူးတရားဆိုတာပေါ်လာတယ်ဆိုတာပါ။တွယ်မိရင် သူ့ အတွက်ပဲစဉ်းစားနေမှာပဲမဟုတ်လား။ မိဘမေတ္တာဆိုတာကလည်း မြစ်ရေတို့ လိုပဲ မြင့် ရာက နိမ့် ရာကိုပဲစီးစင်းနေတတ်တဲ့ သဘောပါလို့ ။
>ကိုချမ်းလင်းနေရေ စာမေးပွဲရာသီမို့ ကျွန်မ မရောက်ဖြစ်တာပါ။ အဖြစ်အပျက်ရော အရေးအသားပါ သိပ်ကိုကောင်းမွန်နေလို့ အချိန်မရပေမဲ့ ပြီးတဲ့အထိ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ မိဘမေတ္တာနှင့် ခွေးတွေနဲ့ လူတွေကြား သံယောဇဉ်ကို ရေးသားထားတဲ့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း နေ့အားရင် ရေးဖို့ စိတ်ကူးရလာပါတယ်။ ကောက်ရမ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
>ဖတ်ရတာတကယ်ကြေကွဲစရာပါဘဲ အစ်ကိုရာခွေးတစ်ကောင်ရဲ့သစ္စာနဲ့ မေတ္တာတရားကိုဖော်ကျူးထားတာ ရိုးရိုးလေးပါ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကိုပီပြင်ပါတယ်ဗျာ . . . ပို့ စ်သစ်လေးတွေဆက်မျှော်နေပါမယ်အစ်ကိုရေ . . . ကိုရေချမ်းအကြောင်းစရေးတဲ့ ပိုစ်ကစပြီးလည်း အစ်ကိုလက်ရည်ပိုတက်လာတယ်လို့ သတိထားမိတယ်အစ်ကိုရေ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ … 🙂
>ကောက်ရမ အကြောင်းဖတ်သွားတယ်အစ်ကိုစိတ်မကောင်းဖူးအိမ်မှမွေးထားတဲ့ သင်္ကြန်မိုးဆိုတဲ့ကြောင်မလေးလင်နောက်လိုက်သွားတုန်းကလဲ တအိမ်လုံးစိတ်ညစ်ဖူးတယ်း)
>မိဘမေတ္တာကတော့ အမြဲ စိးလျက်ပါပဲ ကိုချမ်းရေ။
>အရမ်းကို ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပဲ ကိုချမ်းလင်းနေ။ လူတွေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ ကြားထဲက မေတ္တာတရားတွေ ဖော်ကျူးထားတာ တကယ့်ကို ပေါ်လွင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်သွားမိတယ်။ အော် မေတ္တာတရားရဲ့ ကြီးမားပုံပဲနော်။ကောက်ရမ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ….။ခင်မင်လေးစားလျှက်